Everest: njirimara, mbido, ihu igwe, ahịhịa na anụmanụ | Netwọk Mgbasa Ozi
Mgbe anyị na-ekwu maka elu kachasị elu n’elu ụwa, ọ dị mfe icheta aha nke Everest. Ọ bụ ebe na-eje ozi ọ bụghị nanị dị ka ihe na-ezo aka n'akụkụ kachasị elu n'ụwa, kamakwa dị ka ebe nzukọ na njem maka ndị na-arị elu na ndị hụrụ okike n'anya. A na-akpọ ugwu ugwu dum ebe Everest dị Himalaya. Aesthetic nwere aha dị iche iche dabere na mpaghara ebe anyị nọ. Maka ndị Nepalese aha ya bụ Sagarmāthā, ndị China maara ya dịka Zhūmùlǎngmǎ Fēng na ndị Tibet kpọrọ ya Chomolungma.
N’isiokwu a anyị ga-agwa gị njirimara niile, mbido na mkpa nke Everest.
2 Oge ihu igwe Everest
3 Ọnọdụ Everest
Ọ bụ ezie na a na-etinye ọnụ ọgụgụ, enwere mgbagwoju anya gbasara oke elu nke elu a. Ihe bụ eziokwu ma bụrụ nke a ma ama bụ na ọ bụ ebe kachasị elu na ụwa anyị. Otú ọ dị, ọ bụghị nke kachasị ma ọ bụ ugwu kachasị elu, ebe anyị nwere ike ịtụle ugwu ugwu site na elu ha. Dịka ọmụmaatụ, Mauna Kea bụ ugwu mgbawa ọ dị ihe karịrị mita 10000 n ’elu site n’ ntọala ya wee dịrị n’elu oke osimiri ahụ.
Dị ka anyị kwurula na mbụ, elu nke Everest bụ akụkụ nke Himalaya ma ọ dị na Ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia, n'etiti ala India na mpaghara ndị ọzọ nke Eshia. Ọ na-aga elu nke mita 8.850 n'elu ọkwa mmiri na mkpuchi odika ebe 594,400 square kilomita. E nwere ndị yiri ugwu a na pyramid nwere ihu 3. Ikuku nke dị n'akụkụ kachasị elu nke ugwu a enweghị oxygen ebe ọ bụ na ọ nọ na njedebe nke troposphere. Na mgbakwunye, ọ na-abụ ihe ịma aka nye ndị niile na-arị ugwu, ebe ọ bụ na ifufe na-efekarị ebe a na-esonyere ya na ihu igwe oyi.
Nzuko ahụ abụghị ihe ọzọ karịa oke okwute nke snow siri ike gbara gburugburu nke snow ọzọ nwere ike belata ma ọ bụ mụbaa karịa afọ. Ihe niile dabere na okpomọkụ na okirikiri glacial. Ọ bụrụ na ọnụego nke snow bara ụba karịa nke abrasion, glacier ga-anọgide na-eto. Anyị maara na n'ọnwa Septemba elu dịtụ karịa karịa n'ọnwa Mee. Nke a kwekọrọ na ihe anyị kwurula banyere okirikiri ice.
Oge ihu igwe Everest
Okpomọkụ dịkwa ihe na-anaghị agbanwe agbanwe. Ọ na-adịkarị iche site n'oge a kara aka. Na mbido afọ ha nwere ike iru iru ogo nke -36 degrees, ma n'oge okpomọkụ ọ ruru -19 degrees.
N'oge udu mmiri, nke dị n'etiti ọnwa June rue Septemba, oke ifufe na-efe site na ifufe ruo 285 km / h. Okwesiri ighota na n'oge a nsogbu ikuku di 30% di ala karie nke ozo. Ndị a bụ otu n'ime mgbanwe ndị na-emetụta ikuku nke na-emetụtakwa ndị ugwu niile ka ha na-erute nzuko.
Mita ole na ole n'okpuru ọgbakọ a bụ mpaghara a maara dị ka "mpaghara ọnwụ". Aha a bu nihi na enweghi ikuku oxygen na okpomoku di ala nke achoro ebe a mere ka otutu ndi mmadu ndi ugwu.
Ọ bụrụ na anyị nyochaa profaịlụ nke troposphere n'ịdị elu, anyị na-ahụ na ọnọdụ okpomọkụ na-ebelata ka anyị na-aga n'ihu na ịdị elu. Otú ahụ ka ọ dịkwa maka ọnọdụ ikuku. N'ihi ya, Mgbe anyị rutere ọkwa kachasị elu nke Himalayas anyị nwere oke okpomọkụ na nrụgide dị ala. Ọnọdụ ndị a na gburugburu ebe obibi na-eme ka snow na mkpuchi ice bawanye. N'aka nke ọzọ, ka anyị na-arịda na elu, ma ọnọdụ okpomọkụ, nrụgide na-abawanye na oke mmiri snow na-ebelata. Nke a bụ otu anyị nwere ike isi hụkwuo oke nkume nke ejiri ugwu guzobere.
Everest nwere otutu okpukpu okpukpu nke sedimentary na metamorphic nkume nke ice na snow kpuchiri kpamkpam, karia na nkpuchi di elu. Ejirila nkume ndị a tinye ọtụtụ afọ. Ikwu okwu banyere nguzo elu nke elu a n’eme ka anyi kwue banyere usoro Himalayas dum. Anyị na-alaghachi n'oge Paleozoic na mbubreyo Mesozoic, ebe nnukwu kọntinent a maara dị ka Pangea bụ nanị otu akụkụ ala dị na mbara ụwa niile.
Ihe dị ka nde afọ 180 gara aga, kọntinent a ọ malitere iberibe n'ihi mmegharị nke ụwa. Oke ala abuo putara bu aha Laurasia na Gondwana. Site na nke a, anyị na-ahụ otu esi kewapụta mpaghara India na Eshia. Ọ malitere ịkwaga ebe ugwu ruo mgbe ya na Asia mekọrịtara ma mee ka ihe otiti Indica belata. Otu nsị dị n'okpuru ibe ya bụ ihe kpatara nsogbu na ọnọdụ okpomọkụ na nke mere na akụkụ ụwa jikọrọ ọnụ wee mepụta ugwu ugwu Himalaya. Anyị maara na Everest Ọ dị ihe dị ka nde afọ iri isii.
Ọ bụghị naanị ihe na-adọrọ mmasị maka ndị na-arị ugwu na ndị na-eme njem, kamakwa ebe a na-amụ ọtụtụ ihe dị iche iche. Nyere na akụkụ kachasị elu nke Everest enwere mbelata nke okpomọkụ na nrụgide nke ikuku, a na-egbochi ebe obibi nke ọtụtụ ụdị anụmanụ na osisi. Mụ anụmanụ ụfọdụ nwere ike ịnọ n’elu ala mana ha nwere nnukwu mmachi. Otu ihe atụ nke a bụ yaks. Ha bụ anụmanụ nwere nnukwu akpa ume nke na-enyere ha aka ibi ebe ruru mita 6.000 n’elu. N'aka nke ọzọ, e nwere ụfọdụ ụdị nnụnụ dịka acha uhie uhie nke nwere ike ịgba elu ruo mita 8.000.
Fọdụ n’ime anụmanụ ndị nwere ike ịlanarị n’ebe ndị a bụ panda na-acha uhie uhie, anụ ọhịa ojii nke Himalaya, agụ owuru snow, ụfọdụ ụdị ududo, udele na ụfọdụ pikas. Ndị nke abụọ na-aga ịgbaba n'ugwu n'oge ụfọdụ n'afọ.
Banyere flora, ọ dị obere iche na isi na nkume ụfọdụ anyị nwere ike ịhụ mosses, ọ bụ ezie na site na 4876 mita n'ịdị elu, ị nwere ike ịchọta ụfọdụ lichens na osisi na-etolite cushions. N'elu mita 5600 nke elu enweghị ahịhịa ma ọlị.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere Everest na njirimara ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Geology » Everest